Fanodinana Indray Ireo Karatra Eletrônika sy Resaka Zaza 11 Taona Mpiaro Tontolo iainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2018 12:48 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, Deutsch, Shqip, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Ny bilaogy “Crossroads,” izay mifantoka amin'ny fandraisana andraikitra sosialin'ireo vondron'orinasa ao Shina, no misarika ny saintsika ho any aminà lahatsoratra iray miresaka ankizy iray 11- taon, mpiaro tontolo iainana ao atsimo andrefan'i Shina. Noraisin'ity zazabodo ity ho andraikiny ny mikaroka ny loharano iavian'ny fandotoana ny renirano, ary nisarika ny sain'ireo mpanangona vaovao sy ireo manampahefana.
Tamin'ny Oktobra 2007, niaraka tamin'ny ray aman-dreniny nilalao teny amoron'ny renirano Jialing i Chen ary nahita fako tao anatin'ny rano. Io no nitondra azy hikaroka izay niavian'ilay izy. Taorian'ny enina volana nanaovany fikarohana sy fanadihadiana nandritra ny fotoana nampalalaka azy, nosoratan'i Chen ny tatitra iray momba ny fandotoana ao anatin'ilay renirano ary nanosoka fepetra vitsivitsy izy mba ho fanadiovana azy io.
Rich koa manoratra momba ilay ankizy 11 taona mpiaro tontolo iainana, tamin'ny filazàna fa
Tranga iray ity momba ny fieritreretako ny fomba hitomboan'i Shina mankany amin'ny fanadiovany ny tontolo iainany. Ny olona tsirairay, ny vondrom-bahoaka nitsinjarana fahefana, dia samy harisika eo amin'ny sehatra tsirairay misy azy avy mba hanadihady ny fahapoizinana, hanao fikarohana, handrafitra vahaolana, ary hanao tsindry amin'ireo manampahefana sy mpandraharaha eny an-toerana.
Mandritra izany, ny China Environmental News Digest mandefa lahatsoratra iray momba ny famotehana sy ny fanodinana indray ireo karatra eletrônika efa niasa, izay mety ho ratsy ho an'ny tontolo iainana. Tanisain'ilay lahatsoratra ny fanadihadiana iray vaovao avy amin'ny Anjerimanotolo Batista ao Hong Kong momba ny fanodinana indray ireo akora eletrônika ao Shina. Hitan'ilay fanadihadiana fa manana taha avo amin'ireo metaly mampidi-doza ny toeram-piasana tantaninà fianakaviana iray ao amin'ny tanàna iray ao atsimo atsinanan'i Shina, ary aparatiky ny olona ireo fako misy poizina isaky ny mivezivezy izy ireo.